Xukuumadda Soomaaliya Oo Looga Digay Muddo Kororsi | Sanaagmedia — Warar Sugan
Xukuumadda Soomaaliya Oo Looga Digay Muddo Kororsi
September 17, 2019 - Written by admin
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, Saciid Cabdullaahi Dani oo wareysi gaar ah siiyay laanta afsoomalaiga ee BBC-da ayaa waxaa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020 iyo doorashadii dhawaan ka dhacday maamulka Jubaland ee uu buuqa ka dhashay.
Wuxuu shaki geliyaya suurtagalnimada in doorasho qof iyo cod ah la qabto sanadka so socda sida uu markii horaba qorshuhu ahaa
“Qorshuhu wuxuu in laga guuro nidaamka 4.5, walina la sugayo in arrintaas ay qabsanto., laba sano iyo bar kadib ma heyno calaamo muujinaya arrintaas oo suurtagal ka dhigi karto”, ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Inkastoo aysan kala caddeyn nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doontaa doorashada xigta oo qorshuhu ahaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah iyo qaabka ay u dhici karto ayaa haddana gudoomiyaha guddiga madaxabannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, Xaliimo Yarey waxay marar badan ku celcelisay in Soomaaliya ay ka dhic doontaa doorasho qof iyo cod ah.
madaxweyne Deni ayaa sheegay in arrinta doorashada aysan wali isaga imanin madaxda dalka, balse hore looga heshiiyay.
“Madaxda Federaalka meel ay wali uga hadleyso ma arag, sida doorashada soo socota ay ku dhaceyso, waana arrin ay wali maamulada dalka ka jira iyo madaxda dhexe aysan isaga imaanin oo nidaamka 4.5 laga guuro”
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa kale oo uu sheegay in taas aysan iminka muuqanin, wixii kale lagu badeli doonanana ay tahay hawl u taalo hogaanka siyaasadeed ee dalka.